Doorka Waalidka Iyo Waxbarashada Caruurta - Daryeel Magazine
Doorka Waalidka Iyo Waxbarashada Caruurta
Maqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa kaalinta waalidka ee waxbarashada caruurta iyo qodob muhiim ah oo ku saabsan doorka waalidka ee ubadka.
Waxaa si gaar ah loogu cadeeyey daraasado kala duwan in ka qayb qaadashada waalidka ee waxbarashada caruurta ay saacidi karto:
Hadaba halkan waxaan uga soo jeedinayaa waalidiinta dhowr qodob oo muhiim ah
Waalidku waa in ay ogaadaan in guusha waxbrashada carurteena ay ku xidhan tahay hadba inta aan juhdi la gelino waxbarashadooda iyo la socodkeeda.
Waa in aan ka abuurnaa guryaheena jawi munaasab u ah waxbarasho. Sida waqti go’an in loo cayimo daawashada telefiishiinka iyo in haddii duruufta saamaxdo la sameeyo meel gaar u ah waxbarashada.
Sidaasi oo kale waa in waqti go’an loo cayimo seexashada qoyska
Waa in aan xaqiijinaa subax kasta u diyaargarowga caruurta waxbarasho. Sida in la xaqiijiyo nadaafada dharka, jidhka, buugaagta, qalimaanta iyo in cunto u qaatan dugsiga
Hadii ay kuu cadaato in ay duruustu ku adag tahay, gee meelaha laga caawiyo ardayda (homework centre) ama macalin gaar ah u qabo (home tutor).
10. Maadaama ay suurogal tahay in an maqaalkan akhrintiisa awood aney u wada helin dadka u baahan, fadlan qofkii akhristow ku dabaq qoyskaada iyo siiba caruurtaada waalid
10 Sababood Oo Keena In Caruurtu Ay Waxbarashada Nacaan Tarbiyada Caruurta Iyo Horumarinta Caafimaadkooda Guud 4 Astaamood Oo Lagu Yaqaan Waalidka Wanaagsan QURUXDA QOYSKA: Astaamaha Waalidka Wanaagsan
Ubadkaagu Way Kuu Ekaanayaan
Kusoo dhawaada barnaamijka Xusuus qor dhakhtar ilkood ee ay soo diyaariyo Drs. Hibaaq Buubaal, qeybtaan …